FAKAFAKA: Ny vehivavy tsy ho lehilahy velively ! | NewsMada
Rehefa atosaka avy any ivelany any ny hevitra iray, toa atao rapadango ny hihinanan’ny sasany azy. Tsy misy fanadihadiana na fandanjalanjana fa avy hatrany dia apetraka eo an-tampon’ny loha. Toa tsy mampaninona raha voahitsakitsaka noho ireny hevitra ireny ny maha izy azy ny tena. Vao haingana, ohatra, nanamarika ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny ny Malagasy. « Tenin-dreny » ahoana koa ? Kay moa ka dikan-teny bontolo avy amin’ny hoe : « langue maternelle » ity lazaina fa tenin-dreny ity !
Omaly indray, nanamarika ny Andro maneran-tany ho any vehivavy i Madagasikara. Hatramin’izay ka hatramin’izao, raha vao 8 marsa, tsy maintsy voaresaka etsy sy eroa ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy. Ireo ambara fa fanivaivana ataon’ny lehilahy amin’ny vehivavy. Ireo antsoantso lava manao hoe : « vitan’ny lehilahy, mba vitanay ihany koa » ! sns.
Matoa tonga amin’izao fanitsakitsahana ny lamina voajanahary izao ny fiarahamonina malagasy, nandray anjara goavana tamin’izany ireny hevitra nampidirina sy novoizina teto ireny. Tsy mahagaga raha manomboka mitombo isa ankehitriny ny lehilahy mikaro-dalana ho vehivavy sy ny vehivavy mihevi-tena ho lehilahy. Ny lehilahy misandoka ho vehivavy sy ny vehivavy « mihenjana » ho lehilahy…
Hodian-tsy hita hatrany fa misy fiantraikany ratsy eo amin’ny fiarahamonina malagasy ny fivoizana ireny hevi-dravina mamotika ny lamina voajanahary ireny. Manosika mafy rahateo ireo karazan-kery samy hafa tahaka ny vola, ny « fandrosoana », ny fakan-tahaka, sns, hany ka manomboka tsy rototra firy amina tranga mamoafady toy ireny ny Malagasy sasany.
Ho an’ny Malagasy, tsy misy afaka mifaninana amin-Janahary. Noho izany, misy lamina napetrany tsy voahaja tao matoa misy zavatra hafahafa mipoitra ! Ireny lamina ireny no mila averimberina ho fantatry ny Malagasy fa tsy ilay hevitra mamotika ny lamina voajanahary.